विश्व फुटबलको महाकुम्भ सुरु
२०७५ जेठ ३१ बिहिबार, काठमाडौं । विश्वकप फुटबलको प्रतीक्षा समाप्त भएको छ । रुसको मस्कोस्थित लुजानकी रंगशालामा २१औं संस्करण भव्य समारोहबीच सुरु भएको छ । ... बाँकी अंश»
२०७५ जेठ ३१ बिहिबार, काठमाडौं । विश्वकपको हावाले संसार छोएको छ । विश्वका फुटबलप्रेमीहरुले मनपर्ने समुह र खेलाडीहरुको खुलेर समर्थन गरिरहेका छन् । विश्वकप फुटबलको प्रभाव नेपालमा पनि ठूलै परेको अनुमान अहिले विभिन्न देशको समर्थन गरेर जर्सी लगाएर सामाजिक सञ्जालमा तस्विरहरु सार्वजनिक गरिरहेका छन् । ... बाँकी अंश»
२०७५ जेठ ३१ बिहिबार, काठमाडौं । विश्वको ध्यान अहिले रुसमा छ । जहाँ विश्व फुटबलको ऐतिहासिक मेला चल्दै छ, एक महिना । ... बाँकी अंश»
२०७५ जेठ ३१ बिहिबार, एजेन्सी। विश्वकप फुटबल सबैभन्दा धेरै पटक जितेको देश ब्राजिलमा एक गाउँले आफ्ना घरका भित्ताहरुमा अर्जेन्टिनाको झण्डा बनाएका छन्। ब्राजिल र अर्जेन्टिना दक्षिण अमेरिका महादेशका दुई शक्तिशाली फुटबल खेल्ने देशहरु हुन् र दुई देश बिचको फुटबलमा हुने प्रतिस्पर्धाले बिश्वको ध्यान जहिले पनि तानेकै हुन्छ । ... बाँकी अंश»
नेपालका ४ च्यालनबाट विश्वकप हेर्न पाइने
२०७५ जेठ ३१ बिहिबार, काठमाडौं । नेपालका ४ च्यालनबाट फिफा विश्व कप २०१८ हेर्न पाइने भएका छ । नेपाल टेलिभिजन, कान्तिपुर एच.डि., डिशहोम एक्सन् स्पोर्टस् र एन.टि.भि. प्लसद्वारा फिफा विश्व कप म्याच प्रत्यक्ष प्रसारण हुनेछ । ... बाँकी अंश»
२०७५ जेठ ३१ बिहिबार, काठमाडौं । विश्व फुटबलमा लियोनेल मेस्सी र क्रिस्टियानो रोनाल्डोको सबैभन्दा बढी चर्चामा रहने खेलाडीहरु हुन् । उनीहरुको खेल चलिरहँदा समग्र विश्व नै दुई भागमा विभाजित हुने गरेको छ । रुस विश्वकपका लागि पनि यी दुई खेलाडीहरु र उनीहरुको टोलीको विषयमा व्यापक चर्चा भइरहेको छ । ... बाँकी अंश»
जब विश्वकपको एक दिनअघि प्रशिक्षक हटाइए तब के भयो होला स्पेनलाई
२०७५ जेठ ३१ बिहिबार, काठमाडौं । विश्वकप फुटबल सुरु हुन एक दिन अगाडि जब स्पेनले आफ्ना मुख्य प्रशिक्षक हटायो तब के भयो होला टिममा ? यो निर्णय निकै कठोर भएको स्पेनी फुटबल संघका अध्यक्षले जनाएका छन् । ... बाँकी अंश»
२०२६ को विश्वकप अमेरिका, मेक्सिको र क्यानडाले संयुक्त आयोजना गर्ने
२०७५ जेठ ३१ बिहिबार, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ अमेरिका, क्यानडा र मेक्सिकोले संयुक्त रुपमा आयोजना गर्ने भएका छन् । मेक्सिको र अमेरिकाले यसअघि पनि आयोजना गरेकामा क्यानडाले पहिलो पटक आयोजना गर्नेछ । ... बाँकी अंश»
विश्वकप फुटबल: ईतिहास, रोचक घट्ना, तथ्य र केही बिशेषताहरुको समिश्रण
२०७५ जेठ ३१ बिहिबार, काठमाडौं। विश्वकप फुटबलको उद्घाटन खेलाम आयोजक रुस र एसियाको टोली साउदी अरेबिया आमने-सामने हुँदैछन्। आजबाट रुस विश्वकप २०१८ सुरु हुँदैछ । रसियामा पहिलो पटक २१ औं संस्करणको विश्वकप प्रतियोगिता सुरु हुन गइरहेको छ । विभिन्न ३२ टोलीहरुले भाग लिएको यो प्रतियोगतिको लागि सात सय ३६ खेलाडीहरुका साथमा टोलीका अधिकारीहरु पनि रुस पुगिसकेका छन् । ... बाँकी अंश»
२०७५ जेठ ३१ बिहिबार, काठमाडौं । विश्वकप फुटबलको २१ औं संस्करण बिहिबारदेखि रुसमा सुरु हुँदै गर्दा विश्वकपमा नपुग्ने राष्ट्रका फुटबलप्रेमीहरु आ–आफ्नो टिम रोजेर खेल हेर्ने गर्छन् । ... बाँकी अंश»
जर्मनीसंग सबै मेस्सी, सबै नेइमार र सबै रोनाल्डो छन् – शाही [अन्तर्वार्ता]
मलाई पहिलेदेखि नै ब्राजिल मन पर्छ –राजुकाजी शाक्य [अन्तर्वार्ता]
२०७५ जेठ ३१ बिहिबार, काठमाडौं । विहिबारदेखि रुस विश्वकप सुरु हुँदैछ । विश्वकपको सुरुवात आयोजक रुस र साउदी अरेबियाको खेलबाट हुँदैछ राति पौने ९ बजे यी दुई टोलीहरु आमने सामने हुँदैछन् । ... बाँकी अंश»
रुसमा विश्वकप फुटबल सुरु हुँदै राति उद्घाटन र उद्घाटन खेल
२०७५ जेठ ३१ बिहिबार, काठमाडौं । विश्वकप फुटबलको २१ औं संस्करण बिहिबारदेखि रुसमा सुरु हुँदैछ । रुसले पहिलो पल्ट विश्वकप आयोजना गर्नमात्र पाएको छैन विश्वकप पूर्वी युरोपमै पहिलोपटक हुँदैछ । ... बाँकी अंश»
२०७५ जेठ ३० बुधबार, काठमाडौं । विश्वकप सुरु हुन अब एक दिनमात्र बाँकी छ । यो विश्वकपमा अष्ट्रेलियाका फुटबलप्रेमीहरु भने मर्कामा पर्ने भएका छन् । यो विश्वकपका सबै खेल अष्ट्रेलियाका समर्थकहरुले अष्ट्रेलियामा टेलिभिजनमा निःशुल्क हेर्न नपाउने भएका हुन् । ... बाँकी अंश»
सुटबुटसहित विश्वकपका लागि रुस पुग्यो इंगल्याण्डको टोली
२०७५ जेठ ३० बुधबार, काठमाडौं । विश्वकप फुटबलका लागि इंगल्याण्डको टोली सुटबुटसहित मंगलबार रुस पुगेको छ । इंगल्याण्डको टोली मंगलबार रुसको सेन्ट पिटर्सवर्गमा उत्रिएको हो । ... बाँकी अंश»
२० वर्षपछि पुनः फ्रान्समा विश्वकप उपाधि ल्याउन आफ्नो टोलीलाई हौसाउँदै जिदान
२०७५ जेठ ३० बुधबार, काठमाडौं । २० वर्षअघि आफ्नो राष्ट्रिय टोलीको लागि जित दिलाएको फ्रान्सको टोली पुनः एकपटक एकै स्थानमा भेला भएका छन् । फ्रान्सले अहिलेसम्म जितेको एउटै विश्वकपको उपाधि विजेता टोलीका जिनेदिन जिदानका साथै अन्य खेलाडीहरु पनि मंगलबार साँझ फ्रान्सको राजधानी सहरमा भेला भएका हुन् । ... बाँकी अंश»
विश्वकपका लागि पोल्याण्ड तयार, खुले लेवान्डोस्की
२०७५ जेठ ३० बुधबार, काठमाडौं । रुस विश्वकप फुटबलको समुह एच मा रहेको पोल्याण्ड खेलका लागि तयार भएको जनाउ दिएको छ । पोल्याण्डले अन्तिम वार्मअप खेलमा मंगलबार राति लिथुआनियालाई ४–० ले हरायो । ... बाँकी अंश»
जापानले २३१ मिनेटपछि पुर्यो गोलको खडेरी, कागावाको आकर्षक गोल
२०७५ जेठ ३० बुधबार, काठमाडौं । रुस विश्वकप फुटबलको अन्तिम वार्मअपमा जित हासिल गर्दै जापानले विश्वकपका लागि तयार रहेको जनाउ दिएको छ । जापानले मंगलबार राति भएको खेलमा पाराग्वेलाई ४–२ ले हरायो । ... बाँकी अंश»
२०७५ जेठ २९ मंगलबार, काठमाडौं । रुस विश्वकपको लागि अब केही समय मात्र बाँकी रहेको छ । सबै पुस्ताका मानिसहरुलाई मनपर्ने खेलको महाकुम्भमा विभिन्न ३२ मुलुकहरु उपाधि हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ मैदानमा उत्रिँदैछन् । ... बाँकी अंश»